RUN Fitness | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
RUN Fitness | Hlaing
RUN Fitness ကိုအမှတ် ၇၄ ၊ မြေညီထပ် ၊ အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ၉ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်ရန်အတွက် ခေတ်မှီ စက်ကိရိယာကြီးများ အစုံအလင်ဖြင့် မောပန်းခြင်းမရှိစေရန် လေ၀င် လေထွက်ကောင်းမွန် သည့် အခန်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အေးစိမ့်နေသော Aircon စနစ်များလည်း ပါရှိပါသည်။ Weight gain ၊
Weight Loss ၊ Body building များ အတွက်လည်း လူကြီးမင်းတို့ နည်းစနစ် မှန်ကန်ပြီး အဆင်ပြေစေရန် အတွေ့အကြုံရှိ Trainer များက တစ်ဦးချင်းစီအား ဂရုစိုက် သင်ကြားပြသပေးပါသည်။ အချိန်တိုတိုနှင့် ကစားသလောက် ထိရောက်စေရန် Workout လေ့ကျင့်ခန်းများ နှင့် နေ့စဉ် အစားအသောက် plan များကိုလဲ သေချာစွာ ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးသန့် အ၀တ်လဲခန်းနှင့် Locker များပါရှိပါသည် ။ Member Admission Fees အနေဖြင့် တစ်ရက် 3000 ကျပ်နှင့် တစ်လစာ 35000 ကျပ်ဖြစ်ပါသည် ။ သုံးလစာ သွင်းပါက 105000 ကျပ် ၊ ခြောက်လစာ 210000 ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်စာ 420000 ကျပ် သာကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Fitness ကို မနက် ခြောက်နာရီမှ ည ကိုးနာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး တနင်္လာနေ့ ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီး လူငယ်မရွေး ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ၍ ဖွံ့ဖြိုး လှပသော ကိုယ်ခန္တာကိုပိုင်ဆိုင်ကာ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် လာရောက်ဆော့ ကစားသင့်တဲ့ Fitness လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Special Discount တွေလည်း ရှိလို့ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်း ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါသည်။
06:00 AM - 09:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္လာနေ့ )
No 74, Ground Floor, Insein Road,9Quarter, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား သုခ မှတ်တိုင် 10 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
RUN Fitness RUN Fitness is located at No 74, Ground Floor, Insein Road,9Quarter, Hlaing Township, Yangon. The fitness offers numerous fitness services to customers who would like to build body and to get smart body with effective workout program. Facilities are as Locker, Restroom, Changing Room, Monthly Body measurement, Shower Rooms and Trainers are all provided. The fitness has an obligation to their members to provideasafe environment and to help as many as they can to reach the customers’ goals and beyond. The fitness trainer isaprofessional body builder who will lead you more systematically as you want to achieve. Member admission fee for one month is 35000 kyats,3months for 105000 kyats and6months for 210000 kyats and one year for 420000 kyats only. Promotion programs are coming soon. Opening hours is 6:00 AM to 9:00 PM and Monday is closed. You are welcomed and invited to visit and enjoy.